Archive du 20190121
Lisi-pifidianana Mangataka ny fanavaozana isaky ny dimy taona ny fokontany
Isaky ny folo taona hatramin’izay vao manavao ny lisi-pifidianana isika eto Madagasikara amin’ny ankapobeny.
Ampasikely Amparafaravola Tsy namelan’ny Dr Robinson raha tsy tafidiny am-ponja i Tati Sah
Tsy levon’ny vavonin’ny Dr Robinson ny faharesen’ny kandida n° 13 nanoloana ny kandida n°25 tany amin’ny kaominina Ampasikely distrikan’Amparafaravola any Ambatondrazaka nandritra ny
Lakandranon’i Mozambika Manomboka miforona ny rivodoza
Tany amin’ny 700 km Andrefan’i Toliara no misy ny foiben’ilay andro ratsy miforona ao amin’ny lakandranon’i Mozambika.
Baolina kitra Analamanga andro faha-3 Samy nandresy 4-1 avy ny As Adema sy Uscafoot
Tontosa teny amin’ny kianjan’i Carion ny sabotsy 19 sy alahady 20 janoary 2019 teo ny andro faha-3 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga eo amin’ny baolina kitra sokajy Ligue 1 2018/2019.
Kely tsy mba mamindro!
Vita ny fianianan’ilay filoham-pirenena vaovao. Miandry izay hafitsony izany isika manomboka eto, ka raha ireo fampanantenana rehetra natao aloha no ho tanteraka, dia azo antoka tokoa fa mba hivoatra Ramalagasy,
Varotra sy fanjifana Hiverina ny Foire Vidy Varotra
Haverina indray ny foara Vidy Varotra nampalaza ity vondrona iray ity hatramin’izay manomboka izao ka in-telo isan-taona no tokony hanatanterahana azy.
Fanendrena tomponandraikitra ambony Nametraka fepetra ny ao amin’ny minisiteran’ny fitantanam-bola
Tafapetraka ny fitondram-panjakana vaovao. Mihetsika kosa, manomboka eto ny hazakazaka fakana toerana fanapahana ao ambony ao satria efa voapetraka koa ny fialan’ny governemanta notarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian.
Hopitaly Andranomadio Antsirabe Kamban-telo vao teraka mila fanampiana
Renim-pianakaviana iray no teraka kambana telo mianadahy ny faran’ny herinandro teo tao amin’ny hopitaly Andranomadio Antsirabe.
Loza mahatsiravina Olona 9 maty teny Ambanin’Ampamarinana
Olona 9 no namoy ny ainy noho ny fihotsahan’ny vato be sy ny tany teny amin’ny fokontany Tsimialonjafy eny Ambanin’Ampamarinana ny alin’ny sabotsy 19 janoary teo tokony ho tamin`ny 8 ora alina ny sabotsy lasa teo.